दशैं-तिहार लक्षित सिजीकाे छुट अफर, कुन सामानमा कति छुट ?
काठमाडाैं । इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सिजीले विभिन्न अफरहरु सहितको “कुशल स्वास्थ्य असल पर्व” नामक योजना ल्याएको छ । कम्पनीले नेपालीहरुको महान चाड दशैं तथा तिहार पर्वलाई मध्यनजर गर्दै ल्याएको उक्त योजना अन्तर्गत ग्राहकले विभिन्न नगत छुट र हात खाली नजाने पक्का उपहार प्राप्त गर्नेछन् ।
योजना अन्तर्गत ग्राहकलाई सिजीका कुनै पनि घरायसी सामाग्रीको खरिदमा ३० प्रतिशत नगद छुट र हात खाली नजाने पक्का उपहारहरु प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार सिजीको कुनैपनि एलईडि. टिभीको खरिदमा ३० प्रतिशत सम्मको नगद छुट र ४३ इन्च र सो देखि माथिका टिभीहरुमा निशुल्क जडानको सुविधा रहेको छ । त्यस्तै साईड बाई साईड, मल्टिडोर रेफ्रिजेरेटर र फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिनमा पिजनको मिक्चर र नगद छुट रहेको छ । डाबल डोर रेफ्रिजेरेटरमा भने सिजीको ३ लिटरको भिन्टेज प्रेसरकुकर र नगद छुट रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै, विभिन्न सामानहरु सिङगल डोर रेफ्रिजेरेटर, सोकेश, चेस्ट फ्रिजर र स्पिकरमा आकर्षक नगद छुटको व्यवस्था रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यस्तै ग्राहकले टपलोड तथा सेमिअटोमेटिक वासिङ मेसिनमा सि.जी.कै स्टिम आईरन र माइक्रोवेभ ओभनको खरिदमा कुकिङ किट प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । एसिमा भने निशुल्क जडानको योजना रहेको छ ।
योजना सिजीले यहि भाद्र २९ गते २०७७ साल देखि नेपाल अधिराज्यभरि सिमित अवधिकालागि लागू हुने जनाएको छ ।
सानिमा बैंकको दसैं अफर : निः शुल्क क्रेडिट कार्डसहित अनलाइन सपिङका भाैचर
काठमाडौं । सानिमा बैंकले नेपालीहरुको महान चाड बडादसैंको उपलक्ष्यमा निःशुल्क…
नबिल बैंकको दशैं अफर, सेयर धितोमा कर्जा दिन सूरु
ओरालो लाग्दै सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति छ त प्रतितोला ?
कुमारी बैंकले एसिड पीडित ३ युवतीलाई दियो रोजगारी